Iminyaka elikhulu yeANC yokuzama ukuba
ngobaasboy bama impiriyali (yaye ngenene
ishumi elinesibhozo le minyaka yokuba ngabo)
[Impendulo kwi 'ANC- a century of movement' ka
Pallo Jordan, 23 Dec 2011]
Ngonyaka ka 1948 urhulumente weNational Party wangena elulawulweni. Ngo 1950 zonke intshukumo zobu’Komanisi’ zavalwa umlomo, ukuquka naziphina iincwadi zika Lenin noTrotsky. Ukhumbule ukuba iCPSA yayinobundlobongela obuchasene nabalandeli bakaTrotsky, uvalo milomo lalungajoliswanga kuphela kwi CPSA, kodwa kananjalo kubalandeli bakaTrotsky. Ama impiriyali kunye norhulumente babo abavuma konke eMzantsi Afrika bebebazi ubungozi obubangwa zintshukumo ezizimeleyo zobukomanisi. UNozakuzaku waseFrance walumkisa uHitler ukuba ozakuphumelela imfazwe yiFourth International kuphela. Ngenene ongxowankulu abakhulu bebeyazi ingozi yabasebenzi abazimeleyo, ingakumbi xa ama impiriyali ayesilwa odwa kwimfazwe yehlabathi ngendawo ezintsha zokurhweba, ukuthi kuzakubakho ingozi yotshintsho olululo ulufana nolwaseRussia ngo October ka 1917 xa abasebenzi bathabatha ulawulo kodwa kwesisithuba ingozi yayingabasebenzi abazakuthatha ulawulo eFrance, eBrithane Germany, okanye kwanase Melika okanye kwanase Soviet Union kwakhona ngokuchasene nabalawuli (bureaucracy) baka Stalin, okanye nakwesiphi isathanga okanye ilizwe ehlabathini.
Naku okwathethwa ngu Edward Roux ngesisigaba sexesha: ‘Ukususela emfazweni amakomanisi afumana amakhonkco obuqabane kunye nemibutho enjenge African National Congress kunye nee Congress zase India. Le mibutho zange ibe yeyamakomanisi ngokupheleleyo, kodwa yabanokungena kuzozonke imbono zokulwa nakwintshukumo ezingqalileyo ezo zithe zakha CP’. I-CPSA/SACP ngokwenza zaseka iCongress of Democrats, COD, (for ‘white liberals’) kunye ne Coloured People’s Congress. Nangona I-CP ingazange isebenze esidlangalaleni , babesebenza ngee Congress nange COD, bedlala indima ephambili yokwamkela (adoption) iFreedom Charter ka 1955.
I-Freedom Charter yayinga cacanga ngabom kodwa yayibhalwe ngendlela apha esekhondweni lwezimvo zika Stalin ukuthi kuqala kuzakubakho utshintsho olululo ‘lwentando yesininzi’ (‘democratic’ revolution) oluzakukhokelwa yi ANC, lulandelwe kumhla ongaxelwanga kwingomso lutshintsho lwe Socialism. Into yokuba ‘isigaba’ sokuqala sesobungxowankulu hayi esobu Soshali, ingqinisiswa ngu Mandela, uSlovo yaye kutshanje nguCronin kunye nayi SACP Conference ka 2009:
Kwinqaku, elinesihloko ‘In our :Lifetime’ elikhutshwe kwi Liberation in J une 1956, uNelson Mandela wenza lentetho ilandelayo malunga ne Freedom Charter:
‘Ekubeni iCharter imemezela utshintsho lolawulo lwentando yesininzi oluneziphumo ezininzi, ayisilulo kwaphela uyilo lorhulumente wenkqubo yobuSoshali, kodwa yinkqubo yokumanya imigangatho eyahlukahlukeneyo namaqela phakathi kwabantu phantsi kwesiseko solawulo lwentando yesininzi. Phantsi kweSocialism abasebenzi babambe ulawulo lukarhulumente. Bona namahlwempu bangabanini bezinto zokuvelisa, umhlaba, imizi-mveliso nezixhobo zokusila. Yonke imveliso yeyokusetyenziswa yaye hayi inzuzo. ICharter ayicingi elotshintsho lwezoqoqosho nelezopolitiko lunzulu. Ubhengezo lwayo “Abantu bayakulawula!” lucinga utshintshelo lolawulo hayi nakomnye umgangatho wokuhlala kodwa kubantu bonke belizwe ingaba ngabasebenzi, amahlwempu, amadoda asisigxina okanye ongxowankulu.
Yinyani into yokuba ekufuneni ukuba imizi egcina imali, imigodi yegolide nomhlaba ukuba ubephantsi kolawulo lwesizwe iCharter yenza inzame zokubulala amashishini nemigodi yoodla-bodwa nakumashishini amafama abefudula ephanga ilizwe inkulungwane yeminyaka yaye egweba abantu balo ebukhobokeni. Kodwa elo nyathelo liyafuneka ngokupheleleyo yaye liyafuneka ngoba ukuphumeza iCharter akunakucingelwa, okuyinyani akunakwenzeka, ngaphandle kokuba yaye de abadla bodwa kuqala boyisiwe yaye ubutyebi belizwe bunikezelwe ebantwini. Ukwahlulwa nokulawulwa ngokwentando yesininzi kwabadla bodwa kuyakuvula amadlelo amatsha kukhule ngempumelelo ongxowankulu abangengobaseEurope. Okokuqala kwimbali yelizwe ongxowankulu abangengobaseEurope bazakuba nethuba lokuba ngabanini egameni labo nelungelo amatye okusila nemizi-mveliso, yaye ukurhweba noshishino labucala lizakunyuka yaye luphumelele ngokungazange kubonwe ngaphambili. Ukutshabalalisa abadla bodwa kuthetha ukupheliswa kokuxhatshazwa kwesininzi samasebe abantu abaninzi zizigwili zemigodi nazizityebi zemihlaba yaye kuzakubakho ukukhula jikelele kumgangatho wokuphila kwabantu. Kungokuba kanye iCharter inika amathuba amakhulukazi kwimpembelelo yonke elwa ubukhoboka ngokwemeko ephathekayo kumaqela nemigangatho yonke yilo nto itsala inkxaso ebanzi.’
Ngamanye amagama, kuMandela, iFreedom Charter ayikho malunga nokwakha iSocialism, kodwa imalunga nokwakha ongxowankulu abamnyama. Ngamanye amagama, iFreedom Charter, imalunga nokwakha iqelana lengcungcu ezifunxa igazi kwintsokolo yabasebenzi, yaye asikokuhlalisana ngobudlelwa kwemigangatho eyahlukeneyo (symbiotic), njengokuba uPallo Jordan esitsho. [‘symbiotic’, kungathetha ukuthi abasebenzi kwakunye nongxowankulu bangaxhamla- oku kukuphikisana njengokuba ubungxowankulu buxhomekeke ekuxhatshazweni kwabasebenzi] Isazi ngokupheleleyo ukuba iFreedom Charter yeyongxowankulu, iSACP yaphakamisa iANC ikhokele umzabalazo.
Njengokuba uphakamo lemizabalazo eyayichasene nobukolonali yayigqibe iAfrika iphela, iANC, PAC namanye amaqela azibandakanya kwimizabalazo yobugerila, kodwa ngo 1965 lemizabalazo yatshatyalaliswa. Kwiminyaka engamashumi amabini elandelayo iANC ngenyani yathi shwaka kwaphela eMzantsi Afrika, into engqinwa nangu Pallo Jordan.
U-Pallo Jordan ungqina kwanento yokuba iANC yamkela ‘ulawulo lwabamhlophe’ iminyaka engamashumi amabini njengombutho ‘othembekileyo’ osisongezo esiphikisayo epalamente. Ngamanye amagama, nangona ingcinezelo yesininzi ngongxowankulu ibikuzwelonke, iANC ibihleli izimisele kwindlela ebheka epalamente, ngamanye amagama babonisile ukuba ezona njongo zabo zokwenyani kukuba ngabaphathi bokulawula isininzi sabantu ngepalamente yongxowankulu. Ngamanye amagama iANC zange ibenenjongo zotshintsho olululo lolawulo lobungxowankulu (Revolutionary overthrow of capitalism). Ukuthi, ezona njongo zokwenyani zenkqubo yokusebenza zeANC yayikukugcina inkqubo yemivuzo yobukhoboka, ukugcina ‘kwalenkqubo’ amashumi amawaka afa esilwa yona – leminyaka ilishumi elinesibhozo idlulileyo iqinisekisa oku.